Idaacada BBC Da Oo La Cusboonaysiiyey Heshiidkeeda | Hawraar
Idaacada BBC Da Oo La Cusboonaysiiyey Heshiidkeeda
Dowladda, ayaa daboolka ka qaaday waajibaadka qeybta ka ah sida ay BBC-du shaqeyso,Lacagta dadku bixiyeen ee loo yaqaan TV lesense lana siiyo BBC-da, waxay sii socon doontaa ugu yaraan 11 sano, iyadoo daawadayaashuna ay iibsanayaan adeegga BBC iPlayer, si wixii dhaafay ay dib ugu daawadaan.
Wasiirka dhaqanka John Whittingdale, ayaa cadeeyay in uusan ka horjeedin in BBC caan noqoto. Hadalkan ayuu sheegay isagoo tilmaamayay hadalo soo baxay oo sheegayay in aan shirkadda loo ogoleyn inay sii sheegato barnaamijadeeda waa weyn.
Waxaa sidoo kale la sheegay in guddiga maamula BBC ee Trust-ga la baabi’in doono, waxaa la dhisayaa guddi ka shaqeeya howlaha maalin kasta dhaca, halka Ofcom ay dusha kala socon doonto.
BBC waxay sidoo kale lahaaneysaa awoodda ay ku magacaabi karto guddigeeda oo dowladda ka madaxbanaan. Howlaha tifaftirka waxaa si cad mas’uul uga ahaan doona agaasimaha guud, iyadoo Ofcom la socon doonta dhamaan adeegyada BBC. Waxaana la soo bandhigayaa dhamaan shaqaalaha mushaarkoodu ka badan yahay £450,000.
Agaasimaha guud ee BBC Tony Hall, ayaa sheegay in hal abuurka BBC ay aaminsan yihiin dadka.